I-AutoDesk sele inayo iGoogle Earth-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoDesk sele ineGoogle Earth yayo
I-AutoDesk sele ineGoogle Earth yayo
I-AutoDesk ithathe isigqibo sokungena ekubonakaleni kwe-3D, hayi ukuba ibingenayo, kodwa iqonga layo lalithandabuza kakhulu olu hlobo lomsebenzi ngenxa yokusebenzisa izixhobo ekuboneleleni.
Xa uthenga 3D Geo I-AutoDesk izibeka kwindawo elungileyo njengoko obu buchwephesha (isitayile sikaGoogle seMhlaba) somelele kakhulu kungekuphela kwinjongo zokubonisa kodwa kunye nakwinkonzo yewebhu. I-3D Geo ilayini enamandla kakhulu hayi eyokwakha kuphela, kodwa ikwindawo ebonakalayo equka ukucwangciswa kommandla, ukhenketho, ezothutho kunye nezinye izicelo.
Kwimeko Imizekelo ye-3D-city ngamacandelo ngamacandelo eziseko zedatha yendawo (GDI) esusela kulwazi lokuhambisa ngokulula kunye nophuhliso lweenkonzo zewebhu.
LandXplorer 3D Geoserver inezisombululo kungekuphela nje zokuhambisa isixa esikhulu sedatha ye-geospatial ngokufanelekileyo kodwa kunye nokusetyenziswa kwabaxhasi. Ikwabandakanya izixhobo zokubhala zokuphuhlisa iimodeli ezibonakalayo ze3D.
LandXplorer CityGML Studio sinika izixhobo kunye nemisebenzi yokwenza ubuqu kunye nolawulo lwedatha yendawo, kubandakanya namalungelo okusayina idijithali.
Imodyuli Isakhiwo seMandla ikuvumela ukuba wenze iimeko zocwangciso olusebenzayo, ezinje ngohlalutyo lwe-morphological yomhlaba, imida yomgama, unxibelelwano lwedatha okanye amaphulo olwazi afuna ukuthatha inxaxheba komsebenzisi kwaye ngokucacileyo idatha inokuphakanyiswa okanye ivele kwiGoogle Earth. Idatha inokuveliswa kwifomathi ephathekayo ngokusebenzisa imodyuli ebizwa ngokuba yiPack- & Go efaka lonke ulwazi oluqulethwe kwimodeli kwaye inokujongwa kwiLandXplorer Server okanye kwiLandXlorer City GML Studio.
LandXplorer Viewer ngumboniso wasimahla wesitayile sikaGoogle Earth, esekwe kwiinkonzo zewebhu apho i-3D-isixeko okanye i-3D-imodeli zomhlaba zinokuboniswa. Umahluko phakathi kwenkqubo yokuba ezi zixhobo ziyisebenzisa njani idatha kunye nendlela yesiko yezisombululo ezikhoyo ze-AutoDesk kukuba ngoku basebenza phantsi kweenkonzo zokusasaza kwiwebhu ngelixa ngeentsuku zakudala babeyimodeli ye-3D ngokunikezelwa kwento.
Sicinga ukuba i-AutoDesk iza kudibanisa ezinye iinkqubo ze-3D ezinje ngeMaya, iMap3D, iMephuGuide, iiNdawo eziDala, i-3Dx Max kunye nezinye. Nangona bekukho ulindelo lweMifanekiso yeSititera kunye neModeli yeModeli leyo kusandula ukubhengezwa.
Ewe, siya kubona ukuba i-AutoDesk yenza ntoni ngokudlala
Curisa ukuthenga kwe-3D Geo kunye nomkhiqizo wayo we-LandXplorer. I-3D Geo yi-spin-off ezalwe eYunivesithi yaseDresden. Ndadibana nabo kwi-Intergeo e-Leipzig ngo-Oktobha ka-2007, banginika ilayisenisi yokuvavanya isicelo sam ndivavanya kwaye andizange ndifumane iziphumo kunye nedatha yam. Uvavanyo endikwenzayo lwalukufumana imodeli yedolophu ngqo kwi-DD yedatha yefayili kunye nefayile yefomathi kunye nezakhiwo ezifakekileyo. Kucingwa ukuba isicelo senza oko, kodwa ngokubonakalayo kuphela nedemo yakho yedemo !!!!